Buy Stenbolone powder (5197-58-0) hplc≥98% | AASraw
Nandrolone Poids Series
Trenbolone poids Series
Serasera testosterone volo
Stenbolone poids (5197-58-0)
/ Products / Anabolika Steroids / Stenbolone poopy (5197-58-0)
5.00 avy amin'ny 5	miankina amin'ny 1 mpanjifa Rating
SKU: 5197-58-0. Sokajy: Anabolika Steroids
Ny AASraw dia miaraka amin'ny fahaizana sy ny vokatra avy amin'ny gram ka hatramin'ny filamatry ny Stenbolone (5197-58-0), eo ambany fanaraha-maso CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
Vidéo Stenbolone vovoka
Stenbolone poids ireo karazana fototra
Name: Stenbolone poids
Formula Molecular: C20H30O2
Meny fitetezana 302.45
Melt Point: 154-156 ° C
Storage Temp: vata fampangatsiahana
Color: Fotsy fotsy fotsy na fotsy Fotsy
Ny anarana ara-tsimia: 2-methyl-δ1-4,5α-dihydrotestosteron (2-methyl-δ1-DHT) na 2-methyl-5α-androst-1-en-17β-ol-3-iray
Anarana hafa: Anatrofin sy Stenobolone,
Ny poofenika Stenbolone dia mamokatra ny steroids malaza Anadrol, Oxitosona (oc), ary Anapolon. Tsy mahagaga àry raha ny poofenika Stenbolone dia manana fampiharana mitovy amin'ny zavatra telo hafa. Ny Syntex dia nanamboatra vovon-tsakafo Stenbolone ho toy ny vahaolana malefaka ho an'ny orinasa Anadrol. Ary ny fahombiazan'ny orinasa dia satria ny poofenan'ny stenbolone dia tsy lefom-poana na tsy mahasalotra azy, ary vitsy dia vidy ihany izany. Ankoatra izany, misy fiantraikany eo amin'ny Anadrol amin'ny tranga tsy anemia amin'ny fanabeazana ra tsy hita lany izany satria mampitombo ny isan'ny sela mena. Izany no mahatonga ny stenbolone mofomamy ho an'ny vorona indrindra indrindra ho an'ny atleta hifaninana satria manamora ny famerenana indray rehefa mihinana. Ny fananganana orinasa mpanao fanatanjahan-tena ao anatin'ny herinandro mialoha ny fiadiana ny tompondaka dia matetika mahatsapa ny fizotry ny disadisa sy ny fepetra fanofanana. Ny volo stenbolone dia manjary haingana sy azo antoka izany ary manampy amin'ny fahazoana endrika tsara satria tsy manovo rano izy ary tsy mampitombo ny haavon'ny estrogen. Ho an'ny fanamafisana ny tanjaka sy ny masomboly anefa, ny vovo-dronono Stenbolone dia tsy araka ny tokony ho izy toy ny Anadrol, na dia misy ny sasany aza milaza azy ho Anadrol malaza. Ny poofenika Stenbolone dia mampihena ny vokatry ny anabolika sy ny androgenic kokoa noho ny ambaratonga am-bava ary mitarika ho amin'ny fihenanam-pandaminana miadana sy matanjaka miaraka amin'ny fahazoan-tombony maivana. Ho an'ity tanjona ity, dia aleon'ny vehivavy sy ny fiompiana vehivavy, sy ny atleta zokiolona mahazo vokatra mahafa-po, tsy misy tahotra ny fiantraikany ratsy. Na eo aza izany, ny vovo-dronono Stenbolone dia, indrindra indrindra, izaho steroideo fifaninanana izay nohamafisin'i Daniel Duchaine, "Steroid Guru", tao amin'ny bokiny Underground Steroid Handbook 2: "Ity no steroid tena tsara ampiasaina rehefa misakafo ..."
Inona ny dingan'ny stenbolone?
Koa satria vovon-tsakafo Stenbolone dia ao anaty endrika acetate dia tsy misy afa-tsy fotoana saro-bidy fa ilaina matetika ny injections matetika mba hampihenana ny soatoavin'ny toeran'ny rà avo sy maharitra. Ho an'ny vokatra tsara indrindra ny stenbolone dia atao tsindraindray isan'andro ary ampidirina farafaharatsiny isaky ny andro 2. Ny dosie mahazatra isan-kerinandro ho an'ny atleta dia 200-300 mg. Noho izany antony izany matetika ny tanjaka 50 mg dia tian'ny olona kokoa ary ny atleta iray dia manosika ny ampolim-bolo iray mililila iray isan'andro, na mametra ny fampiasana ny antsasany. Ny vehivavy dia mahomby amin'ny 100- 150 mg / herinandro ary tokony hampizarazara ny dosage isan-kerinandro amin'ny faritra telo mitovy. Ny voka-dratsiny dia ambany satria ny fatrana dia ateraky ny aty sy ny odymas, ny gynecomastia, ary ny tosidra ambony. Ny tratra sy ny fihanaky ny herisetra eo amin'ny lehilahy dia ambany sy tsy fahita firy, ary ny fihenan'ny voan'ny hormonina manokana. Ny fihanaky ny fanaintainana eo amin'ny vehivavy koa dia tratran'izany ary ho an'ny ankamaroan'ny olona manana fahamatorana rehefa omena dosie avo be na mandritra ny herinandro maromaro. Tsy misy ny trondro amin'ny vovo-bolony Stenbolone, noho izany dia mety tsy hita ao amin'ny tsena mainty na ny fitaovana niaviana na ny fakana sary.
Famaritana ny tsingerin'ny Stenbolone ho an'ny lehilahy.
Week Anatrofin Testosterone
1 500mgs / herinandro 250mgs / herinandro 20mgs / ed 7caps / ed
2 500mgs / herinandro 250mgs / herinandro 20mgs / ed 7caps / ed
3 500mgs / herinandro 250mgs / herinandro 20mgs / ed 7caps / ed
4 500mgs / herinandro 250mgs / herinandro 20mgs / ed 7caps / ed
5 500mgs / herinandro 250mgs / herinandro 20mgs / ed 7caps / ed
6 500mgs / herinandro 250mgs / herinandro 20mgs / ed 7caps / ed
7 500mgs / herinandro 250mgs / herinandro 20mgs / ed 7caps / ed
8 500mgs / herinandro 250mgs / herinandro 20mgs / ed 7caps / ed
9 500mgs / herinandro 250mgs / herinandro 20mgs / ed 7caps / ed
10 500mgs / herinandro 250mgs / herinandro 20mgs / ed 7caps / ed
Ahoana ny fiasan'ny stenbolone?
Ny stenbolone dia mitovy amin'ny dromostanolone sy oxymetholone. Izany dia endriky ny DHT miaraka amin'ny fifamatorana roa eo amin'ny karbaona 1 sy 2 ary ny methyl group ao amin'ny 2. Ny vondrona methyl ao amin'ny toeran'ny 2 dia miaro ny molekiola amin'ny aromatisma amin'ny estrônina sy amin'ny ambaratonga sasany, ny tsy fanaovan-tsonia amin'ny tazan'aretina 3-alpha hydroxysteroid dehydrogenase. Ity vondrona 2-methyl ity dia mampihena kely ny fifehezana amin'ny receptor androgen. Izany dia mahatonga ny molekiolana izay misy fifandraisana kely kokoa amin'ny mpandoka ny androgen noho ny primobolan saingy toy ny primobolan, ity steroid ity dia tsy azo ovaina amin'ny metabolites estrogenic amin'ny alàlan'ny aromatization. Stenbolone roapolo volo dia heverin'ny sasany ho mora amin'ny version of oxymetholone. Ity steroid ity dia manana rafitra mitovy amin'ny oxymetholone fa tsy C-17 alpha alkylated ka mahatonga azy ireo manana fiantraikany kely amin'ny asan'ny fo. Ny stenbolone dia manamboatra rà mena toy ny oxymetholone ary manabolisina amin'ny dingana sasany amin'ny dromostanolone izay naseho koa mba hampitombo ny sela mena.
Ny voka-dratsin'ny otrik'aretina dia ho ambany kely, satria tsy mahasalama ao anaty estrogen izany. Noho izany, dia tsy hisy ny fiantraikany eo amin'ny endri-tsolika toy ny fiakaran'ny tosidra, ny tsy fahitan-tory, ny fitehirizana rano, ary ny gyno. Mahaliana fa ny anatrofinina dia manana toetra kely misy androgenic, na dia tsy misy ny aromatisma amin'ny estrogen aza, mitarika ho amin'ny mety amin'ny fananana akn, hoditra hoditra, ary fampitomboan'ny herisetra. Ny vehivavy àry dia tokony hiahiahy momba ity steroid ity.
Ordinatera minitra 10grams.
Ny fanadihadiana momba ny habetsahana mahazatra (ao amin'ny 1kg) dia azo alefa amin'ny ora 12 ora aorian'ny fandoavana.
Ho an'ny baiko lehibe kokoa dia alefa amin'ny 3 andro fiasana aorian'ny fandoavana.
Hoentina amin'ny hoavy ho avy.
Manana fiantraikany mahazatra ny stenbolone
Ny vovon-tsakafo Stenbolone dia toa tsy miteraka tombony amin'ny ankapobeny toy ny anadrol na be dia be loatra ka mety tsy ho toy ny fihanaky ny fihanaky ny 11-beta hydroxylase. Ny pneoma stenbolone dia nodorana mba hampidirana isan'andro isan'andro noho ny antsasaky ny androm-piainan'ny acetate ester. Ankoatr'izay, ny esterate acetate dia toa mamoaka fanaintainana sy fitaintainana eo amin'ny tranonkala fitsaboana. Stenbolone ny vovony menaka dia mitovy ny androgenic activity raha ampitahaina amin'ny 1-testosterone, ny version tsymethylated ity zava-mahadomelina ity, fa miaraka amin'ny asa anabolika ambony. Azo inoana izany noho ny fihenan'ny fibaikoan'ny metabolita 3-alpha hydroxy. Ny poofenika Stenbolone dia manome ny tombontsoa maro amin'ny oxymetholone izay mihen-danja sy miha-drà.
Ahoana no hividianana vovoka Stenbolone avy any AASraw
1.Toy ny contact us amin'ny mailaka rafitra fanadihadiana, na skype anaty aterineto solontenan'ny mpanjifa (CSR).
Fanamarihana na Hafatra
Stenbolone raw powder Recipes:
Hanadihady ny solontenan'ny mpanjifantsika (CSR) amin'ny antsipiriany, ho an'ny antsipiriany.
8 Zavatra Zava-dehibe Amin'ny Stenbolone Powder
Testosterone Propionate vovoka
Oral Turinabol (Oral Tbol) vovoka
Nootropics vovoka (13)
Anabolika Steroids (46)
Meny fitetezana (2)
Nandrolone Poids Series (7)
Serasera testosterone volo (18)
Trenbolone poids Series (6)
Hormones vehivavy (21)
Estradiol poids Series (7)
Vokatry ny vinaingitra (13)
Ny hafa (14)
Ny 8 mampihetsi-po indrindra amin'ny herisetra mampihoron-koditra manerana izao tontolo izao
Ny top 10 Top Best Selling Weight Loss Supplement
Ny 7 Best Nootropics (Smart Drugs) eo amin'ny tsenan'ny -Phenylpiracet
Mividiana vovoka Testosterone Enanthate amin'ny Bulk
Modafinil: Aiza no hividianana vovobony Modafinil ambony
Dr. Patrick Young on Oxandrolone (Anavar) vovoka
Michael McCoy on Oxandrolone (Anavar) vovoka
Nandrolone tsy dekoanoate vovoka
Bortezomib poopy (179324-69-7)
FAHAFATESANA SY NY FAHAFATANA: Ny akora ity tranokala ity dia amidy mba hanaovana fikarohana irery. Ampiharo ny fepetra momba ny varotra. Tsy an'ny fahazoan-dàlana maha-olombelona, ​​na ny fitsaboana, ny fanadinam-bokatra na ny fampiasana an-tokantrano.